နခေ့ငျးကွောငျတောငျ တိုကျခနျးပျေါထိ တကျလုတဲ့ ရုပျသံ – Myanmar
ဒီကနေ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ လူအမြားကွား ပွောစမှတျပွုရတဲ့ စီစီတီဗီ ဗီဒီယိုကတော့ တကယျ့ကို လူတိုငျး သတိထားစရာ အဖွဈအပကျြတဈခုပါပဲ။ ဒီဗီဒီယိုဖိုငျဟာ ဘယျမှာ ဖွဈခဲ့တယျဆိုတာ အတိအကမြသိရပမေယျ့ မွနျမာစကားပွောဆိုသံတှကွေောငျ့ မွနျမာနိုငျငံက တိုကျခနျးတဈခုမှာ ဖွဈခဲ့တာတော့ အသအေခြာပါပဲ။
ဗီဒီယိုရဲ. အစမှာ အမြိုးသမီးငယျတဈဦး ဈေးဝယျပွနျလာပွီး မိမိတိုကျခနျးရှေ. ရပျပွီးတံခါးသော့ဖှငျ့နစေဉျမှာ အနောကျက အမြိုးသားတဈဦး လိုကျတကျလာပွီး အပျေါထပျကို ထကျတကျသှားကာ ခကျြခွငျးဆိုသလို ပွနျဆငျးလာပွီး အမြိုးသမီးဆီက လုယကျခဲ့တာပါ။
ယခုဖွဈစဉျကွောငျ့ လူမှုကှနျယကျမှာတော့ လူအခငျြးခငျြးကွား သတိထားနထေိုငျဖို့ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
နေ့ခင်းကြောင်တောင် တိုက်ခန်းပေါ်ထိ တက်လုတဲ့ ရုပ်သံ
ဒီကနေ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ လူအများကြား ပြောစမှတ်ပြုရတဲ့ စီစီတီဗီ ဗီဒီယိုကတော့ တကယ့်ကို လူတိုင်း သတိထားစရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ ဘယ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိရပေမယ့် မြန်မာစကားပြောဆိုသံတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတော့ အသေအချာပါပဲ။
ဗီဒီယိုရဲ. အစမှာ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဈေးဝယ်ပြန်လာပြီး မိမိတိုက်ခန်းရှေ. ရပ်ပြီးတံခါးသော့ဖွင့်နေစဉ်မှာ အနောက်က အမျိုးသားတစ်ဦး လိုက်တက်လာပြီး အပေါ်ထပ်ကို ထက်တက်သွားကာ ချက်ခြင်းဆိုသလို ပြန်ဆင်းလာပြီး အမျိုးသမီးဆီက လုယက်ခဲ့တာပါ။
ယခုဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူမှုကွန်ယက်မှာတော့ လူအချင်းချင်းကြား သတိထားနေထိုင်ဖို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။